PSJTV | राजधानीमा बाघ?
आइतबार, २० साउन २०७५ बच्चु हिमांशु
ललितपर: गत शुक्रबार रातको २:४० बजे आसपासमा ललितपुरस्थित बज्रबाराहीको घनाजङ्गलदेखि केहीपरको सल्लाघारीमा टहरो बनाएर बसेको परिवारका साना दिदीभाइ पिसाब फेर्न निस्किए। सिमसिम पानी परिरहेको थियो। पिसाब फेर्नासाथ उनीहरु टहरोभित्र छिरेर फेरि सुत्ने तरखरमा लागेकामात्रै के थिए, अकास्मात् आफ्नो टहरोनजिकै ठूलो गर्जनका साथ केही कराएको उनीहरुले सुने। दुई परिवार मिलेर बनाइएको सो टहरोमा बस्ने गरेका ती दिदीभाइका आमाबुवा त्यस रात त्यहाँ थिएनन्। उनीहरुका ठुलो दाइभने घरमै थिए र के हो भनि पल्लोपट्टी बस्ने अर्का दाइलाई उनले उठाए। दोश्रोपटक फेरि उस्तै चर्को गर्जन आयो। अनि दुवैले पक्का गरे, यो बाघनै हो। सो बाघ बेलाबेला गर्जिंदै सल्लाघारी डाँडाको उकालो चढ्यो। रातको चकमन्नता र सिमसिम पानीले गर्दा उनीहरुले बाघलाई देख्नभने पाएनन्। तर ढ्याङ्ग्रो ठटाएर धपाउने मूर्ख उपायभने उनीहरुले सोचिसकेका थिए। बाघभने गर्जिंदैगर्जिंदै डाँडाको पल्लोपट्टी लाग्यो।
भोलिपल्ट बिहान बस्ती वरीपरी राति बाघ आएको बारेमा हल्ला चल्यो। सुन्नेजति कसैले बाघनै हो भनेर किटान गरे। कसैले चितुवा कराएको भनेर तर्क गरे। तर धेरैको निचोडचाहिं बाघनै भएको भन्ने थियो। त्यो गर्जनपछि उज्यालो भइन्जेल घनघोर वर्षा भएकाले बाघ या चितुवा के हो भनेर छुट्याउनलाई हिंडेको पाइलाको प्रमाणभने उनीहरुले फेला पार्न सकेनन्।
आजभन्दा ७ वर्षअघि, ललितपुरकै विशंखुनारायणदेखि माथि घर भएकी रजनी तामाङकी बहिनी मीना बेलुकी ट्युसन पढेर घर फर्किंदै थिइन्। उनी एकाग्र भएर बाटोमा हिंडिरहेकी थिइन्। अचानक बाटोमाथिको डिलबाट बाघले उनलाई नाघेर बाटोमुनि हाम फाल्यो र उँधैतिर फरार भयो। उनी डरले हतारहतार घरतिर भागिन्। पछि अरु गाउँलेहरुलेपनि त्यो बाघलाई देखेको कुरा गरे।
राजधानी आसपास घनाजङ्गल भएकाले चितुवाचाहिं बस्तीमा आउनु सामान्य कुरा भएपनि बाघ आएको कुराभने पत्याउन सकिने अवस्था छैन। किनभने बाघ नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको घनाजङ्गलमा पाइने जनावर हो। जीवविज्ञानमा स्नातकोत्तर सकेका पंछीसंरक्षक हरि बस्नेतका अनुसार बज्रबाराहीमा सुनिएको आवाज बाघको नभएर चितुवाको हो। उनका अनुसार राजधानीको बस्तीमा चितुवा छिर्नु सामान्यजस्तै हो। बेलाबेला आहाराको खोजीमा नजिकको जङ्गलबाट बस्तीसम्म चितुवा आउने गरेको उनको भनाइ छ। हुन त एउटा बाघका लागि राजधानी आसपासको जङ्गल जतिनै घना भएपनि पर्याप्तभने छैन। करिब ४० वर्ग किमिको क्षेत्रफल केवल एउटा बाघले ओगट्ने गर्छ, जुन ठूला निकुञ्जहरुमा मात्रै सम्भव छ।
तर पहाडी जिल्लामा बाघ पाउँदै नपाइने भन्नेचाहिं होइन। गत जुनमा एक अखबारमा प्रकाशित तथ्यगत समाचारका अनुसार सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराको जोगबुढा भन्ने ठाउँबाट बाघलाई क्यामेरामा कैद गरिएको थियो। यो घटनापछि संरक्षणविदहरु स्वयं चकित बनेका थिए। यस हिसाबले हेर्ने होभने तराईसंग जोडिएको राजधानी आसपासको जङ्गलसम्म बाघ आइपुग्नु सम्भवचाहिं देखिन्छ।
बाघ यसरी किन पहाडतिर विस्तारै बढिरहेको छ भन्ने कुरा यतिबेला गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। के साँच्चिकै राजधानीसम्म बाघ आइपुगेको हो त? संरक्षणविदहरुले यतातिर अबको खोजलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
हाललाई बज्रबाराहीका स्थानीयबासीहरु गत शुक्रबार मध्यराति बस्तीमा बाघनै छिरेको भन्ने कुरामा एकमत भएका छन्। अब उपत्यका छेउछाउ राति हिंड्दा सबैले चनाखो भएर हिंड्नपर्ने भएको छ।
कोरोनाबाट जोगिन काठमाडौं
नेपालको नक्सामा पहिलोपटक लिम्पियाधुरा पनि समेटिने भएको छ। सुगौली सन्धिले महाकाली नदी सीमानदी भने पनि नेपालको नक्सा कालीको मुहानभन्दा तीन सय १० वर्गकिमियता लिपुलेकसम्म मात्र अंकित थियो। कालीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म भारतले ...